Ihe Mgbanwe E-mail na ihe ezighi ezi nke mebiri. Wepu ozi ịntanetị na Exchange Boxbox.
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Hichapụ Ihe Mgbanwe site na Mmejọ
Hichapụ Ihe Mgbanwe site na Mmejọ? DataNumen Exchange Recovery nwere ike iwepu ha!
Ọ bụrụ na ihichapụ email ma ọ bụ ihe ọzọ na igbe akwụkwọ ozi Exchange, site na ịpị bọtịnụ "Del", mgbe ahụ, a ga-akwaga ya na nchekwa "Ihe Ndị Ehichapụ". Nwere ike iweghachi ya site na ịgbanye na nchekwa "Ihe ndị ehichapụ", ịchọta ozi-e ma ọ bụ ihe ịchọrọ, ma bugharịa ya n'ọnọdụ mbụ ya ma ọ bụ folda ndị ọzọ dị mma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihichapụ ihe Exchange dịka akọwara na ọnọdụ atọ ndị a, mgbe ahụ ọ ga-ehichapụ kpamkpam.
Gị ma ọ bụ onye nchịkwa jiri ọrụ nhichapụ siri ike (Mgbanwe + Del) iji hichapụ ihe Exchange. Ọrụ nhichapụ siri ike na-ahapụ Exchange ihichapụ ihe ahụ na-enweghị iziga ya na nchekwa "ihe ndị ehichapụ" ma ọ bụ Cache ehichapụ ihe mgbe ehichapụghị ihe ndị ehichapụ ehichapụ.
Gị ma ọ bụ onye nchịkwa hichapụ ihe ahụ na folda "ihe ndị ehichapụ".
Onye nchịkwa na-ehichapụ igbe akwụkwọ ozi ma ọ bụ ọbụna ihe nkesa Exchange n'amaghị ama mgbe ị na-eji mmemme Microsoft Exchange Administrator. N'ọnọdụ dị otú ahụ, Exchange kpamkpam na-ehichapụ igbe akwụkwọ ozi ahụ ma ọ bụ ihe nkesa na ndekọ ahụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ehichapụ ihe ahụ kpamkpam, ị ka nwere ike iweghachite ya folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ kwekọrọ na igbe akwụkwọ ozi Exchange, dị ka OST faịlụ bụ akwụkwọ na-anọghị n'ịntanetị nke ọdịnaya igbe akwụkwọ ozi dị na nkesa. Ma ọnọdụ abụọ dị:
Syn mekọrịtabeghị OST faịlụ na ihe nkesa. N'okwu ahụ, ihe ahụ ehichapụ sava ahụ ka dị na OST faịlụ kwesịrị.
I mekọrịtawo ihe OST faịlụ na ihe nkesa. N’okwu ahụ, a ga-ewepụkwa ihe ahụ ehichapụ na sava ahụ na OST faịlụ.
Maka ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike iji ya DataNumen Exchange Recovery iji weghachite ihe ehichapụ na OST faịlụ. Mana maka ọnọdụ dị iche iche, ị nwere ike ịtụ anya ị nweta ihe a na-ewepụtaghị site na ebe dị iche iche.
iji DataNumen Exchange Recovery iji kpochapu ihe ndi ehichapụrụ kpamkpam:
Biko mee dị ka ndị a iji weghachite kpamkpam ehichapụ Exchange ihe na DataNumen Exchange Recovery:
Na kọmputa gị, chọta OST Faịlụ kwekọrọ na igbe akwụkwọ ozi Exchange ebe ịchọrọ iwepụ ihe. Nwere ike ikpebi ọnọdụ faịlụ dabere na akụ ya gosipụtara na Outlook. Ma ọ bụ jiri search rụọ ọrụ na Windows iji chọọ ya. Ma ọ bụ chọọ n'ọtụtụ ọnọdụ akọwapụtara.
Mechie Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta ya OST faịlụ.
Họrọ nke OST faịlụ ahụ dị na nzọụkwụ 1 dị ka isi iyi OST faịlụ ga-natara.
Pịa “Start Naghachi ”bọtịnụ iji naghachi isi iyi OST faịlụ. DataNumen Exchange Recovery ga-enyocha ma weghachite ihe ndị ehichapụ na isi mmalite OST faịlụ, ma chekwaa ha na faịlụ Outlook PST ọhụrụ aha ha akọwapụtara na nzọụkwụ 5.
Mgbe usoro mgbake ahụ, ị ​​nwere ike iji Microsoft Outlook iji mepee mmepụta PST na-edozi ma nweta ihe ndị a na-edeghị ede. Ọ bụrụ na ịmeghị mmekọrịta ahụ OST faịlụ na ihe nkesa ahụ, mgbe ahụ i nwere ike ịchọta ihe ndị ahụ edepụtaghị na ọnọdụ mbụ ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmekọrịtalarị ndị OST faịlụ, ị pụrụ ịchọta undeleted akpọkwa na ọnọdụ ebe ha na-adịgide adịgide ehichapụ. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị na-eji “Shift + Del” bọtịnụ kpamkpam ihichapụ ozi na nchekwa “Igbe mbata”, mgbe ahụ DataNumen Exchange Recovery ga-eweghachiri ya na “Igbe mbata” nchekwa mgbe usoro mgbake ahụ. Ọ bụrụ na ị jiri bọtịnụ “Del” iji hichapụ email a na folda “Igbe mbata”, wee hichapụ ya kpamkpam na folda "ihe ndị ehichapụ", mgbe emechara mgbake ahụ, a ga-eweghachi ya na nchekwa "Ihe ndị ehichapụ".
Cheta na: Nwere ike ịchọta oyiri undeleted akpọkwa na nchekwa "Recovered_Groupxxx" Biko leghara ha anya. Maka oge ụfọdụ mgbe ị wepụrụ otu ihe na igbe akwụkwọ ozi Exchange gị ma mekọrịta ya na OST faịlụ, Outlook ga-eme ụfọdụ oyiri anya. DataNumen Exchange Recovery dị ike nke na ọ nwere ike weghachite akwụkwọ ndị a niile ma lebara ha anya dị ka lost & achọtara ihe, nke enwetara ma tinye ya na folda akpọrọ "Recovered_Groupxxx" na mmepụta edoziri PST faịlụ.